ओलीमा अहंकार अझै उस्तै रहेछ : गगन थापा - Naya Pageओलीमा अहंकार अझै उस्तै रहेछ : गगन थापा - Naya Page
ओलीमा अहंकार अझै उस्तै रहेछ : गगन थापा
प्रधानमन्त्रीलाई सोधे–मन्त्रिमण्डल विस्तार किन नगरेको ?
काठमाडौं, २८ साउन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार उस्तै रहेको बताएका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको अहंकारको जवाफ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कामबाट दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै थापाले नेकपा एमालेसहितका विपक्षी सांसद्हरुले सरकारलाई गरेको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कामबाट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन २६ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका रुपमा संसदमा गरेको सम्बोधनमा अझै पनि अहंकार बाँकी रहेको बताए । ‘सरकारले प्रतिपक्षले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । ओलीले सम्बोधनका क्रममा अहंकार देखाएका थिए, उनमा अझै पनि आत्मश्लाघा बाँकी रहेछ । उनमा अझै पनि क्रोध रहेछ । इर्ष्या पनि । रिस र कुण्ठा पनि उस्तै देखियो’, थापाले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले विपक्षले गरेको प्रश्नलाई निम्छरो नठानोस् । जसले गरे पनि प्रश्न प्रश्न नै हो । विपक्षीका हरेक प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।’
थापाले विपक्षीका हरेक प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने पनि बताए । ‘विपक्षीका प्रश्नको उत्तर यो सरकारले दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘ती प्रश्नको जवाफ गफबाट होइन, कुराबाट होइन सरकारले कामबाट दिन सक्नुपर्छ ।’ बिहीबारको बैठकमा पनि विपक्षीहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारको ध्यान यसले तान्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘आज पनि संसदमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । हरेक प्रश्न र कुरा सरकारले सुन्नु आवश्यक छ’, उनले थपे, ‘हरेक प्रश्न र विषयलाई लिएर सरकारले कामबाट जवाफ दिने संकल्प गर्नु जरुरी छ । सरकारले हरेक दिन उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छु, हरेक समस्याको समाधान गर्न सक्छु भन्नुपर्छ ।’
थापाले विपक्षीले प्रश्न उठाइरहँदा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । थापाले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता किन नदिएको ? यत्रो दिनसम्म भित्र घचमच के छ यो जनतासँग सरोकार हुने विषय होइन’, उनले थपे, ‘द्रूतगतिमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्छ ।’